Sawirro: Madaxweynaha FIFA Oo Is Casilay. – SBC
Sawirro: Madaxweynaha FIFA Oo Is Casilay.
Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA Sepp Blatter ayaa shir jaraa’id oo uu haatan ku qabtay magaalada Zurich, waxa uu kaga dhawaaqay inuu iska calisay shaqada FIFA oo uu soo hayey tan iyo sanadkii 1998-kii.
Usbuucan ayey ahayd markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinnimo ee FIFA markiisii shanaad, waxaana uu shaaca ka qaaday in fikirkiisa uu ku maamulayo FIFA inay la wadaagin kooxaha iyo ciyaartoyda kubadda cagta Adduunka, taas oo sida uu sheegay uu ku go’aansaday inuu isaga dego jagada madaxtinnimo ee FIFA.
Sepp Blatter waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in xubnaha joogtada ah ee 209-ka waddan inay si deg deg ah u dooran doonaan madaxweyne cusub oo hoggaamiya FIFA.
Guddiga FIFA ayaa la isugu yeeri doonaa inta u dhaxaysa bisha December 2015 ilaa iyo bisha Maarso 2016 si ay u doortaan madaxweyne cusub oo xilka FIFA ka bedela Sepp Blatter, balse Blatter ayaa sii hayn doona xilka madaxweynenimo ee FIFA ilaa iyo inta laga qabanayo doorashada cusub.
Sepp Blatter Ayaa Yirir “FIFA waxa ay u baahan tahay dib u dhis iyo dib u habayn xooggan, waxaan isagu yeeri doonaa xubnaha FIFA si ay u doortaan madaxwayne cusub.” “Isma soo sharixi doono mar kale, haatan waan ka madax banaanahay doorashada.” Ayuu Yuru Blatter.
“Inkastoo xubnaha FIFA ay dib ii doorteen, haddana qorshaheyga ma’ahan mid ay taageerayaan dadka kubada cagta jecel.”
“Ciyaartoyda, taageerayaasha kooxda iyo dhammaan inta uu noloshooda saameeyo kubada cagta ma’aysan taageerin qorshahayga.”
“Danta FIFA ayaa igu wayn aniga, waana sababta aan u qaatay inaan iska casilo shaqadeyda.” Ayuu Hadalkiisa Ku Soo Xiray Madaxweynihii Hore ee FIFA Sepp Blatter.
Daawo sawiradda Shirka Jara’id ee is casilaadda.